Qoritaanka warqad aqoon isweydaarsi ah - Warqadaha waraaqaha ah
Qorista warqad xilliyeed
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhinacyada waraaqaha siminaarka
Qoritaanka waraaqaha ereygu waa qayb ka mid ah maado kasta maanta sida aamiin kaniisadda dhexdeeda. Isla bilawga waxbarashadooda, ardayda waxaa la siiyaa dareen ah inaysan baran karin aqoon-isweydaarsi la'aan iyo iyagoon qorin warqad u dhiganta. Arday kasta wuxuu rajaynayaa waxbarashadiisa. Sababtoo ah hadda xorriyadda barashada ayaa ugu dambayntii timid. Jaahwareerku wuxuu ku yimaadaa si dhakhso leh qaab warqad aqoon-isweydaarsi ah oo si madax-bannaan loo abuuro. Ereyga warqad waa inuu u dhigmaa tilmaamaha sayniska - wixii loola jeedo taas? - laakiin waxba lagama sheegin intii uu socday aqoon-isweydaarsiga. Sidee ayay tahay in warqad aqoon-isweydaarsi loo qaabeeyo? Sidee loo wajahayaa? Sideen ku heli karaa "saxda" iyo suugaanta muhiimka ah? Sideen ula macaamilaa mawduuca?
Su'aalaha ku saabsan su'aalaha aan jawaab cad ka helin ardayda kale. Sababtoo ah waxay ka fikiraan oo keliya shaqadooda iyo imtixaanadooda si ay ugu guuleystaan ​​inay ku guuleystaan ​​simistarka.
Sababtoo ah jahwareerka dib-u-habeynta sanadihii la soo dhaafay ee heer Yurub, shuruudaha waxqabadka ayaa sii kordhaya weligoodba, xilliyada kama dambaysta ah ee waraaqaha muddada-qoran iyo waraaqaha aqoon-isweydaarsiga ayaa aad iyo aad u sii yaraanaya. Siminaarro aasaasi ah oo lagu barayo shaqada sayniska ayaa marar dhif ah la bixiyaa, iyadoo ay ugu wacan tahay shaqaale la'aan ka jirta kuraasta shaqsiga ama dhaqaale la'aan awgeed.
Waraaqaha aqoon-isweydaarsiga guud ahaan waa inay ku jiraan ugu badnaan 15 bog. Laakiin maxay ku jiraan 15-ka bog? Tirada la cayimay ee bogagga waxay si gaar ah u tixraacaysaa qaybta qoraalka. Qaybaha kale - jadwalka waxyaabaha ku qoran, liiska tirooyinka iyo soo gaabinta, lifaaqyada, buugaagta - laguma darin baaxadda guud. Qaybta qoraalka, oo sidoo kale loo yaqaan qoraalka socda, had iyo jeer waxay raacdaa qaab isku mid ah: Hordhac sharaxaad leh dhibaatada iyo hadafka shaqada, qeexitaanka qaybta ugu muhiimsan ee ereyada, xaaladda cilmi baarista, sharaxaadda faahfaahsan ee dhibaatada, doodda, soo koobidda iyo gabagabada. Aragtida mustaqbalka ayaa lagu dari karaa dhamaadka qaybta ugu weyn.
Shuruudaha rasmiga ahi waxay la xiriiraan, iyo waxyaabo kale, font, cabirka farta, kala-goynta khadka, xigasho iyo qaab-dhismeedka buug-gacmeedka. Gaar ahaan markay tahay xigasho, faahfaahinta shaqsiyadeed ee barafasoorka waa in lagu xisaabtamo. Waa kuwan fursadaha
si aad ugu shaqeysid qoraalka hoose ama
sida ku cad habka Harvard ee qoraalka socda.
Ma ahan wax la yaab leh in ay jiraan fursado kala duwan oo ku jira xigashada. Sidaa darteed, qof kasta oo haysta ku darista sida caddayn tixraac ah oo ay ku xiran tahay habka loo soo xigtay ayaa loo qaadan karaa nasiib. Si kastaba ha noqotee, tan waa in markaa la sameeyaa inta lagu jiro shaqada. Tixraaca keligiis iyo abuuritaanka buug-gacmeedka ayaa bixiya dhibaatooyin badan oo saameyn taban ama togan ku leh fasalka guud ee warqadda siminaarka.
Ka caawi qoritaanka ereyga warqad
Waqtiga cadaadiska, la'aanta aqoonta aasaasiga ah iyo wixii ka sarreeya dhammaan cadaadiska waxqabadka waa la yareyn karaa haddii aad u qaadato caawimaad xirfad leh warqaddaada seminarka. Caawimaada wakaaladeena qorista waxay kuxirantahay qaybaha shaqsi ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale ka koobnaan kartaa qoritaanka dhammaan muddada ereyga.
Qoraayaasha ghostwriters ee ka shaqeeya shirkadeena waa khabiiro ku saabsan shaqadooda. Dhammaantood waxay leeyihiin shahaado tacliimeed, qaar sidoo kale waxay haystaan ​​shahaadada PhD-da, waxayna sii kordhiyeen shaqooyinkooda jaamacadeed. Sidaa darteed, qorayaasheena sidoo kale waxay yaqaanaan wax ka qabashada keydka macluumaadka maadooyinka gaarka u ah cilmi baarista suugaanta ee ballaaran.
Hay'adayada iyo qoraaga wax kuu qori doona ayaa kula socon doona inta lagu guda jiro diyaarinta warqadaada seminar. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaan sameyno hubin tafatiran oo qumman.
Shaqadan, oo uu qoray qoraaga cirfiidka, ugu dambayntii waxay u adeegtaa sidii shaqo shaqadiinu ahayd. U soo gudbinta warqad aqoon-isweydaarsi ah oo uu gebi ahaanba abuuray curiyaha qoraaga maadaama shaqadaada u gaarka ah jaamacadda lama oggola. Waxaa loo arkaa khiyaano waxaana lagu ciqaabayaa si waafaqsan. Xitaa diiwaangelinta iyo ka saarida jaamacadda waa suurtagal. Sida shaqooyinka kale ee tacliimeed, waa inaad soo gudbisaa oo aad saxeexdaa waxa loogu yeedho cadeynta sharafta ama xitaa dhaarta taas oo aad ku xaqiijinayso inaad qori doonto shaqadan hada jirta si madaxbanaan oo aan lahayn caawimaad dibadeed oo aan ahayn wax kale oo aan ahayn kuwa ku qeexan buug-gacmeedka Ilaha la isticmaalay.
Dib-u-akhrinta waxaa ku taliyay borofisarro badan, gaar ahaan waraaqaha lagu dhammaystirayo simistarada dambe iyo kuwa ugu dambeeya. Markaad tafatirayso, waxaan u hubinaynaa shaqada qodobbada soo socda:
Qaab dhismeedka xukun iyo dherer. Weedhaha Nested waxay si fiican ugu akhriyaan suugaanta Latin-ka qadiimiga ah, laakiin marar dhif ah ayaa la fahmi karaa.
U hoggaansanaanta qaab-dhismeedka loo baahan yahay: Cilladaha, hordhaca, qeexida dhibaatada, dejinta yoolka, qeybta aragtida, qeybta falanqaynta, waxaa suuragal ah qeyb la taaban karo oo leh qiimeyn, dood, soo koobid iyo gabagabo? Ma jiraan nasasho fikir?
Hubinta higaadda: Higaadda saxda ah ma sahlana maanta. Marka lagu daro sharciyada cusub ee higgaadda, xeerarkii hore ayaa inta badan sii socda in lagu dabaqo.
Ma arki kartaa dunta guud? Kalaguurka cutubka waa in si hufan loogu dhawaaqo. Ku boodboodka fikirka ayaa si fudud u lumin kara aragtida guud ee macnaha guud. Tan macnaheedu waxay noqon kartaa in waxa ku jira ay fahmi karaan oo keliya qofka qoray ereyga. "Qiimo lagu daray" mar dambe lama sifeyn karo.
Ugu dambeyntiina, warqadda aqoon-isweydaarsiga waxaa loo hubiyaa u hoggaansanaanta qaab-dhismeedka rasmiga ah: Qaabdhismeedka la cayimay (cabbirka xarfaha, kala-goynta xariiqda, qoraalka hoose, dheereynta midig iyo bidix) ma lagu dhaqmay? Qaabka xigashada miyay u dhigantaa tilmaamaha? Miyuu buug-gacmeedka si sax ah loo abuuray? Ilaha internetka ayaa intabadan noqda godad. Xigashada laguma sameeyo qeexitaanka URL-ka. Macluumaad dheeraad ah ayaa had iyo jeer loo baahan yahay.
Kaliya marka la falanqeeyo dhammaan qodobbada ayaa warqadda siminaarka gaar ahaan adiga laguugu soo gudbin doonaa adiga. Haddii aad rabto isbeddelo, annaga ama qoraaga ayaa tixgelin siin doonna isbeddeladan oo aan ku dari doonnaa.
Hubinta tayada ee duurka ku ah waraaqaha siminaarka